Goobtani cajiibka ah ayaa kuu sheegi doonta sida saxda ah ee kaarka deynta kuu kugu habboon yahay - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Boggan cajiibka ah ayaa kuu sheegi doona sida saxda ah ee kaarka deynta kugu habboon - BGR
Goobtan cajiibka ah ayaa kuu sheegi doonta sida saxda ah ee kaarka deynta kugu habboon - BGR
BGR waxay iskaashi la sameysay Naadiga Guy si loogu daboolo alaabta kaararka deynta. BGR iyo Qodobada Guy waxaa laga yaabaa inay guddi ka helaan kaar bixiyayaasha.
Haddii aad xiisaynayso deeqda kaarka amaahda ee ugu wanaagsan ee aad ka heli karto xilligan, dalabyada kaararka oo leh gunooyin aad u wanaagsan oo soo dhaweyn ah ayaa hubaal ah inaysan ka maqnayn. Dukaanleyda kaarka Savvy, si kastaba ha noqotee, waxay ogyihiin inay jiraan sidoo kale dalabyo abaalmarin soo dhaweyn ah oo xitaa ka sii wanaagsan kuwa la heli karo (oo ku lug leh isla kaarka, oo aan ka yarayn). Xitaa ka sii fiican? Qof kasta ayaa sameyn kara baaris si uu u arko haddii uu jiro mid la heli karo - waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ogaato halka laga fiirinayo meesha saxda ah. Meeshani waa websaydhka Qalabka CardMatch .
Haddii aadan booqanin goobta in muddo ah, waxay u fiicnaan laheyd inaad dhowaan aragto si aad u aragto waxa laga heli karo. aad. Dadka qaarkiis xitaa waa la bartilmaameedsaday dalabyada cajiibka ah ee 100 000 ee ku saabsan American Express Platinum Card® - dalab u baahan 5 000 USD inay ku kharash gareeyaan saddexda bilood ee ugu horreysa ee furitaanka akoonkaaga si ku guuleysto gunnada soo dhoweynta ah ee dhibcaha 100 000.
Kala duwanaanshaha kaladuwan ee lahaanshaha kaarka amaahda ee aan si faahfaahsan u sharaxno halkan waxaa ka mid ah dalabyo la beegsaday oo loo qaybiyey siyaabo kala duwan. Soo saareyaasha sida American Express, tusaale ahaan, waxay inta badan doortaan wadada ugu tooska badan ee loogu deeqi karo dalabyadan la bartilmaameedsanayo - iyagoo si fudud u diraaya faahfaahinta dalabyada wakhtiga xadidan ee macaamiisha gaarka ah loo soo xulay. Soosaarayaasha kale waxay bixiyaan abaalmarinada diiwaangelinta oo keliya laamaha jirkooda.
Isla mar ahaantaana, Qalabka CardMatch CreditCards.com waa kanaal kale oo dalabyadaas bartilmaameedka ah badiyaa laga helo. Boggu wuxuu adeegsadaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aasaasiga ah (sida magacaaga, cinwaankaaga iyo qayb ka mid ah lambarkaaga Amniga Bulshada) si ay ugu dhigmaan kaararka hadda jira ee aad xaq u yeelan karto.
Sida loo isticmaalo CardMatch
Markaad degto bogga Qalabka CardMatch waa sida soo socota:
Gali macluumaadka shakhsiyeed ee loo baahan yahay, haddii aadan dooneynna, si firfircoon ula xiriir CardMatch mustaqbalka, hubi in sanduuqa "ii soo dir macluumaadka" sanduuqa aan la hubin. Waxaa kale oo mudan in waqti la qaato si loo hubiyo in xitaa haddii waxa aad sameyn doontid ay kuu horseedi doonto wax loogu yeero "sahan aamusnaan" taariikhda taarikhdaada amaahda, ma saameyn doonto dhibcahaaga amaahda. .
Xaaladdan oo kale, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysaa waa inaad aqbasho shuruudaha iyo shuruudaha. In ka yar 60 sekan, waa inaad aragtaa dulmar guud oo ku saabsan deeqaha la bartilmaameedsaday. Marka ugu horeysa ee aad hubiso, waad arki kartaa qaar ka mid ah dalabyadaan cabsida leh oo aan dadweynaha u heli karin - ama aan ahayn. Tirada dalabyada aad hesho iyo lambarkooda cajiibka ah ma noqon doonaan kuwo joogto ah, marka ha filanin inaad liistada nooca ah aad hesho mar kasta oo aad hubiso aaladda xaqiijinta.
waxa aad aragto oo aad rabto inaad aaddo tallaabada xigta, wax layaab ah oo halkaas ka jira. Guji halkaan "Codso" badhanka si aad uhesho websaydhka bangiga oo aad u dhammayso hawsha dalabka.
Halkan waxaa ah muuqaal hordhac ah oo ku saabsan waxa aad ka heli karto
Waa tan tusaale ku saabsan sida loo bixiyo marmarka qaarkood iyadoo loo sii marayo  CardMatch noqon kartaa mid aad u xiiso badan wixii aad ka heli doontid meel fagaare ah. Waxaan aragnay dalabyo la bartilmaameedsaday oo soo muuqday on CardMatch kaarka American Express Platinum Card iyagoo bixinaya ilaa dhibco dhibco ah '100 000' oo ah iibsiyada 5 000 $ saddexdii bilood ee ugu horreeyay.
100 000 Qodobbada Abaalmarinta xubinnimada Amex u qalantaa qiyaastii 2 000 USD oo ku saleysan qiimeynnada ugu dambeeyay ee ka yimid laga bilaabo TPG . Kaadhkani wuxuu ku habboon yahay socdaalayaasha soo noqnoqda waana runtii boqorka kaararka abaalgudka safarka ee safarka markay tahay faa'iidooyinka raaxada.
Si aad u magacowdo dhowr, waxaad kasban doontaa abaalmarin xubinnimo Amex, kasbataa ilaa $ 500 sannad-guddiyada, oo waxaad heli doontaa shabakad ballaaran oo duullimaadyada diyaaradaha ee adduunka oo dhan, iyo faa'iidooyinka kale. Kaarku wuxuu qaataa lacag sanadeed aad u sarreysa, laakiin aad bay ugu habboon tahay kuwa ku raaxeysta faa'iidooyinka buuxa oo dhan. Isbarbar dhig taas dalabka dadweynaha ee loogu talagalay Amex Platinum - kaliya 60 000 dhibco soo dhaweyn ka dib markii ay kharash gareeyeen 5 000 dollars saddexdii bilood ee ugu horreeyay.
Erayga dhamaadka ah
Mar labaad, waxaa mudan in la xuso hubinta aaladda CardMatch looma tixgelin doono dhacdo hal mar ah. Haddii aadan haysan wax dalab ah waqtigan ama haddii aadan si gaar ah ugu qanacsaneyn waxa aad aragto, soo laabo xilli dambe, maadaama laga yaabo in waqtigaas la helo ay had iyo jeer is beddeli karto waqti kasta .
Haddii aad sugto wakhtiga saxda ah ee aad ku dalbanayso kaarka deynta oo gaar ah oo aad haysatid dalab ka fiican kan aad ku aragtay meel kale, Qalabka CardMatch xaqiiqdi waa u qalantaa. tixgelintaada. Si kastaba ha noqotee, sida had iyo jeer ah, maskaxda ku hay xaaladaada dhaqaale iyo sidoo kale ujeedooyinka safarkaaga iyo taariikhdaada amaahda markaad go'aansato inaad dalbato kaarka, taas oo sidoo kale kuu horseedi karta kharashyo aadan dooneynin inaad u beddesho daruuri. . Intaa waxaa sii dheer, liiska waxyaabaha lagu soo bandhigay ayaa ah intaas uun - bixinno, dammaanad kama qaadanayo in laguu oggolaan doono kaararka.
Isha Sawirka: Keith Srakocic / AP / Shutterstock
Ku xakamee albaabka garaashkaaga taleefankaaga '30 $' ee iibka hore ee Jimcaha ee 'Black Friday' - BGR
Taxanaha Apple Watch 5, Echo Dot, 2 Video Doorbell, AirPods 2, Plus - BGR